တရုတ် CupLock ငြမ်းစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Zhongming
1 ။ နိဒါန်း:
Luowen CupLock ငြမ်းသည်သစ်အမျိုးအစားများဖြစ်ပြီးသုတေသနပြုခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်သောပူးတွဲနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ဆက်စပ်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အရည်အသွေးနှင့်အသုံးချခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
၁။ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ - အဓိကအစိတ်အပိုင်းများတွင်စံ၊ လယ်ဂျာနှင့်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ သိုလှောင်ရန်၊ လွှဲပြောင်းရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လည်းလွယ်ကူသည်။
၂. လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှု - အပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောခွက်သည်ဝက်ဘ်ပွတ်တိုက်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဆွဲငင်အားရှိခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှုကိုမိမိကိုယ်မိမိပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်စေခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လယ်ဂျာကိုတည်ငြိမ်စေသည်။ ချောင်သည်, လယ်ဂျာပူးတွဲစံတည်ငြိမ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ဘူး။
၃။ ထူးခြားသောအသုံးပြုမှု - တိကျတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအရ Cup Lock ငြမ်းကိုအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့်တစ်တန်းနှစ်တန်းတပ်လို့ရနိုင်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးကိရိယာများအတွက်လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - ဘောင်ကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ ကော်လံကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ စသည်တို့
၄။ မြင့်တင်ခြင်း - စံသည် axially ဖြင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သုံးဖက်မြင်အာကာသအတွင်း၊ ငြိမ့်ညောင်းခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ပုံ၏တည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Cross plate သည် axial shearing ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအားဖြင့်ကောင်းမွန်ပြီး၊ ပိုက်တစ်ခုစီ၏ဝင်ရိုးကိုပန်းကန်တစ်လုံးတည်းဖြင့်ပြုလုပ်သောကြောင့် ၁၅% စွမ်းအားနှင့်ပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
5. ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း - Luowen သစ်သားများသည်အဆင့်မြင့်သံမဏိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ပျက်စီးရန်လွယ်ကူသည်သို့မဟုတ်ပုံသဏ္outာန်မရှိသောကြောင့်၎င်းကိုအကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သတ္တု Cuplock ငြမ်း
Kwikstage ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ငြမ်း Adjustable ဝက်အူဂျက်, သတ္တု Cuplock ငြမ်း, Ringlock ငြမ်းကွင်းခတ်, Ringlock ငြမ်းအစိတ်အပိုင်းများ, အကြီးစား Duty Ringlock ငြမ်း,